ပင်လယ်နှင့်တူသော ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ပင်လယ်နှင့်တူသော ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်
ပင်လယ်နှင့်တူသော ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်
Posted by alinsett on Aug 7, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing | 25 comments
နဂိုတိုင်းပဲ ထားပါကွယ် အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
လိင်ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ကြတာတွေ ကြားနေ တွေ့ နေရတဲ့ အခါတိုင်း ကျွန်တော်
စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မိပါတယ် ။
ယောကျာ်း တစ်ယောက် အဖြစ်ကနေ မိန်းမတစ်ယောက် အဖြစ် ပြောင်းလဲ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် . .
မိန်းမတစ်ယောက်ကနေ ယောကျာ်းတစ်ယောက် အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
တစ်ခုသေချာတာကတော့ . . .
မိန်းမ အဖြစ် လိင်ပြောင်းလဲ ခံယူလိုက်တဲ့အခါ
မိခင် ဖခင် နှစ်ပါးရဲ့ သား တစ်ယောက် သေဆုံးသွားပါတယ် ။
ယောကျာ်းတစ်ယောက် သေဆုံး ပျောက်ကွယ်သွားပြီး မိန်းမ ဆိုပြီး ဘဝတစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါတော့တယ် ။
မိန်းမတစ်ယောက်က ယောကျာ်း စိတ်ပေါက်ပြီး ယောကျာ်းအဖြစ် လိင်ပြောင်းလဲ ခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း မိခင်ဖခင်တို့ ရဲ့ သမီးတစ်ယောက် သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ် ။
အဲဒီ ထက် ဆိုးပြီးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ် ။
လင်ယောကျာ်း နဲ့ သားငယ်တစ်ယောက် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် က ယောကျာ်းစိတ် ပေါက် လာပါတော့တယ် ။
သူငယ်ငယ်ထဲက ယောကျာ်းတစ်ယောက်လို နေထိုင် ချင်ပေမယ့် အခြေအနေအရ မိန်းမအဖြစ်နဲ့ပဲ သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
မိန်းမအဖြစ်နဲ့ပဲ ယောကျာ်းရ လိုက်တဲ့အပြင် / သားငယ်တစ်ယောက်ပါ မွေးဖွား ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ ဗီဇ အရ ယောကျာ်းစိတ်ပေါက်ပြီး ယောကျာ်းတစ်ယောက်လို နေထ်ိုင်ချင်စိတ်က ဖျောက်မရတဲ့အပြင် ပိုပို ဆိူးလာပါတယ် ။
အဲဒီ မိန်းမဟာ သူ့ အမျိုးသား အိမ်မှာ မရှိတဲ့အခိုက်တွေမှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်လို နေထိုင်ပါတော့တယ် ။
နက်ခ်တိုင်ကြီး စည်းပြီး အမျိုးသားဝတ်စုံကိုကျကျနန ဝတ်လိုဝတ် ။ ဆေးတံကြီးခဲလိုခဲ ။
ယောကျာ်းကြီးတစ်ယောက်လို နေတယ်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီ လို ယောကျာ်းကြီးတစ်ယောက်လို နေ နေတာကို
အမျိုးသား ဖြစ်သူကလည်း မကြခဏ တွေ့ ပါလေရော ။
မိန်းမ ဟာမိန်းမပဲ ယောကျာ်းမဖြစ်ချင်စမ်းပါနဲ့ လို့ ပြောပေမယ့် မရပါဘူး ။
ပို ပို ဆိုးလာတာပါပဲ ။
အမျိုးသားဖြစ်သူက လုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ အဆုံးမှာ သူတို့ လင်မယား
အမျိုးသမီးက အေးအေးဆေးဆေးပဲ အိမ်က ထွက်သွားပါတော့တယ် ။
လင်ယောကျာ်းနဲ့ သားငယ်လေး က ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ထုံးစံအရ လင်ယောကျာ်းက သူ့ အမျိုးသမီး ဟောင်းကို မယားစရိတ်ထောက်ပံ့ရတယ် ။
ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ တစ်နေ့ မှာတော့ . . . သားငယ်လေးက သူ့ မေမေကို တွေ့ ချင်လာတယ် ။
အမေကို သားက လွမ်းသလို အမျိုးသမီးဟောင်းကိုလည်း လင်ယောကျာ်းက လွမ်းဆွတ် ပါတယ်။
ဒီတော့ . . . သားအဖနှစ်ယောက်သား သွားတွေ့ ကြ ပါတော့တယ်။
ယောကျာ်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး နေထိုင်ရာကို ရောက်တော့ . . .
အိမ် တံခါးကို ခေါက် တယ် ။
အိမ်ထဲက အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက် ထွက်လာတယ် ။
ဘာကိစ္စလဲ လို့မေးတယ် ။
သားငယ်လေးက သူ့ မိခင်ကို တွေ့ ချင်လာလို့ လာတွေ့တာပါ ။
သူ့ မိခင် ဘယ်မလဲ လို့ပြန်မေးတဲ့အခါမှာတော့ . . .
အိမ်တံခါး လာဖွင့်ပေးတဲ့ အမျိုးသားကြီးက
အဲဒီ မိန်းမ မရှိတော့ပါဘူး ။
အဲဒီ မိန်းမ က ယောကျာ်း အဖြစ် လိင်ပြောင်းလဲ ခံယူလိုက်ပြီး
အခု ကျုပ် ပါပဲ လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
သားအဖ နှစ်ယောက်သား အလွန် အံ့သြတုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ် ။
စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွာနဲ့ ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်တော့ အဲဒီ အဖြစ်ကြီးက ရင်နာစရာကြီးပါပဲ ။
လင်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် သေသွားတယ်။
ဒါမှ မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။
အဲဒိ အစား အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်က ဖြစ်တည်လာတယ်။
သားငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိခင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။
မိခင်အဖြစ် လက်ညိုး ထိုးပြစရာ မရှိတော့ဘူး ။
ဒါ မိခင်ပါလို့ ပြောလည်းးး ယောကျာ်းကြီး တစ်ယောက်ကို ထိုးပြရတာမို့ဘယ်လိုမှ မြင်မကောင်းပါဘူး ။
ဒီကလေးငယ်ဟာ ယောကျာ်းကြီး နှစ်ယောက် ပေါင်းဖက်ပြီး ရလာတဲ့ ကလေးငယ်လိုလို ဖြစ်နေပါတယ် ။
မိခင်ပြစရာ မရှိတော့တဲ့ အဖြစ်ကို ကြုံလိုက်ရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ အဖြစ်ကလည်းးး ယူကြုံးမရစရာပါပဲ ။
မူလက အရှိတရားတစ်ခု ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ် ။
အဲဒါ ဆုံးရှုံးမှုပါ ။
အနည်းနဲ့ အများ နာကျင်စရာဆုံးရှုံးမှု ပါပဲ ။
သဘာဝကို လွန်ဆန်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်ခံစားပေးရမှာပဲပေါ့လေ ။
ဂျူး စာအုပ်တွေလည်း ကုန်ပါပီတော်…
သိပါဝူး.. နင့်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်ဆိုတော့.. ဟိဟိ… ဘာတွေများ ၀န်ခံမို့လဲလို့…
နီပြောတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်… ဒါမယ့် လူလွတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးမှုအကြီးကြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. မိဘအနေနဲ့တော့ သားဆုံးရှုံးပေမယ့် သမီးတစ်ယောက် ရတယ်လို့ပဲ မှတ်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ်ကွီ…
နာလည်း မကြုံဖူးတော့ သေချာမသိဘဲ ရမ်းတုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း
ဘယ်မိဘ မဆို မွေးထားတတုန်းက
ကြီးမှ သမီး ဖြစ်သွားးး
မွေးထားတုန်းက သမီးလေး ကြီးမှ သား ဆိုပြီး ဖြစ်လာ
ဆိုတော့ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ လက်ခံဖို့ မရနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘနေရာက မခံစားဖူးသေးတော့ ခက်သား
လောလောဆယ် ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်လာပြီ ဗျို့  . . . မိဘ ဆိုတာကတော့ ဗျာ . . သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သမီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးလာရင် သူ့ဘာသာသူ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သာသွား. . . . ဖြစ်ကာမှ ဖြစ်ရော ဗျို့  . . . ဒါ ငါ့ သွေးသား ဆိုတဲ့ အသိ နဲ့ ချစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ “တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုး သာ ပစ်မယ်၊ သားဆိုးသမီးဆိုး တော့ ပစ်ရိုးမရှိ” လို့ လဲ ဆိုကြတာကိုး ဗျ . . ဆိုတော့ . . အောင့်သက်သက်တော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေမယ့်လို့ လဲ . . . လက်သင့်ခံ ပြီး ချစ်နိုင်မယ် လို့ ကျုပ် တော့ ထင်မိတယ် ဗျို့  . . . ။
မိန်းမ ကနေ ကျားကြီး ဖြစ်သွားတော့ မယားစရိတ် ပေးစရာ မလိုတော့ ဘူး မဟုတ်လား။
ကောင်းတာလေး ဆွဲကြည့် တာပါ။
အဲဒိ နေရာကို ပြောဖို့စာများမှာစိုးလို့ ချန်ခဲ့လိုက်တာ
အပြန်မှာ တရားရုံးကို ဝင်တယ် ။
သူ မယားစရိတ် ပေးနေခဲ့တဲ့ မိန်းမက အခု
ယောကျာ်းကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီ မို့ 
ဆက် ပေးစရာ မလိုတော့ကြောင်း
ဆက် မပေးနိုင်တော့ကြောင်း လျှောက်ထားတာပေါ့ ။
တရားရုံးကလည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိ
မယားစရိတ် ဆက် ထောက်ပံ့ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာ တဲ့ ။
မယားစရိတ် ထောက်ပံ့ နေရတဲ့ အဖြစ်ပေါ့
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ဆိုတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်မယ်။
စာအုပ် သေချာ မမှတ်မိတော့
ခညားတို့ရဲ့ ဒေါ်ဂျူးကြီးရော ယောက်ျား ဖစ်တွားဘီလား ငှင်င်င်
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတယောက်
ဟိုတလောက တော့ နိုင်နံဂျား ထွက်သွားသေးတယ်။
မောင်အလင်းဆက် ရေးတဲ့ဤပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ခင်ခ က ဒီလိုတွေးနေမိတယ်
အမျိုးသမီးကနေ အမျိုးသားဘ၀(လိင်)ပြောင်းသွားလို့ အမျိုးသားဖြစ်ပြီဆိုရင် ထိုသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါက ကိုယ်ရင်ဝတ်ခွင့် ရှိ မရှိ၊ ရဟန်းခံလို့ ရ မရ ဆိုတဲ့ အဖြေကို………..
အက်ဒိလိုဆို ဝတ်ခွင့် ရ မရ သိချင်ပါဘိ
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ပထမ ၄ ၅ ကြောင်းလောက် ဖတ်လိုက်တော့ ရင်ထိတ်သွားတယ်။
ထိုင်းမှာကျောင်းတက်တုန်းက ဂျပန်ဆရာတစ်ယောက်ပြောတာ မှတ်မိသေးတယ်…
ဂျီပုန်း အခြောက်ပေါတာ ဒို့လို ယောက်ျားသားတွေအတွက် ကောင်းတာပေါ့ တဲ့…
အဲ… ယောက်ျားလျာ ဘောပြားတွေပေါတာတာတော့ မကောင်းဘူး…
အမှန်အကန်လေးတွေကို ကျုံးသွင်းပြီး ငါတို့ စားခွက်ကို လုမှာတဲ့…
စကားအတင်းစပ်… မ ကနေ က်ျား ကိုပြောင်းရတာ သိပ်မလွယ်လှသေးဘူး…
ဒါကြောင့် နဂိုအတိုင်းပဲ ထားပါကွယ်
FTM Surgery too expensive and tech difficulty than MTF surgery
တွေးစရာလေးတွေ ပေးသွားပါလား အိမ်သာကျင်းရဲ့
သဘာဝ တရားကို လွန်ဆန်တဲ့ အခါမှာ
လွန်ဆန်နိုင်တာ ရှိသလို လွန်ဆန်လို့ မရစကောင်းတဲ့ အရာတွေလဲ ရှိသကိုး
ဒီအတိုင်း နေတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါကြောင်း
ဒါကတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့လေ..တချို့ဆို..ယောက်ျားစိတ်ပေါက်လို့..ယောက်ျားတွေနဲ့နေရာကနေ..အိမ်ထောင်ကျသွားလို့..ကလေးပါရနေသော်လည်း..ယောက်ျားစိတ်ကမပျောက်သွားဘူး။ဒီလိုတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်…သဘာဝကို လွန်ဆန်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်ခံစားပေးရမှာပဲပေါ့လေ ။ဆိုတဲံ့စာသားကိုသဘောကျပါ၏။
ဖတ်ရှု ခံစားပေးသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်းရေ
.ယောက်ျားစိတ်ပေါက်လို့..ယောက်ျားတွေနဲ့နေရာကနေ..အိမ်ထောင်ကျသွားလို့..ကလေးရပြီး မိန်းမပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့ မြင်ဖူးတယ်။
ြ့ဖစ်သင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပါပဲ..အန်တီမမရေ..
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်ကတည်းက အလက်ဆင်းလက်ရာလို့ ထင်သားပဲ
ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လေ… ဘယ်လိုပြောရမလဲ .. ပြောတတ်တော့ပါဘူး
လာဖတ် အားပေးတဲ့အတွက် ရှဲရှဲ
မောင်ရွှေရိုးက ရတာ မောလားး
တကယ်တော့ သဘာဝအတိုင်းသာလျှင် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်လို နေထိုင်ခွင့်မရပေမယ့်လည်း ယောက်ျားကောင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေမျိုး( ဥပမာ – သဘောထားကြီးတာ၊ ညှာတာတာမျိုးပေါ့။ ဒီ့ထက်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။) ကိုယ့်မှာရှိအောင် လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။
အဲလိုပဲပေါ့ မိန်းမတစ်ယောက်လို မနေရဘူးဆိုပေမယ့် မိန်းမကောင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ( ဥပမာ – အနစ်နာခံတာ၊ စေ့စပ်သေချာတာမျိုးပေါ့။) ရှိအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုး တကယ့် ယောက်ျားကောင်း၊ မိန်းမကောင်းတွေ ရှိသင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ တကယ့် ယောက်ျား၊ တကယ့် မိန်းမပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ ၁၀၀% ဟုတ်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်။
ဒါနဲ့ စကားအတင်းစပ်…. “ပင်လယ်နှင့်တူသော” ဆိုတော့ အရာရာကိုလက်ခံနိုင်အောင် စိတ်ကိုဖွင့်ထားတယ်လို့ ပြောချင်တာလားဟင်။
ရေပြင်ဆိုပေမယ့်..သောက်လို့ မရဘူး ။
တခါတရံ မုန်တိုင်းလို ထန်ပြီး.လှိုင်းတွေ..ဗြောင်းဆန်ပြီး.လူတွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တယ် ။
ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ .. ပြာလွင်လှပ..လူတေါကို ဖြားယောင်း တတ်တယ်..။
မာယာ နည်းနည်း များတယ်…။
စီးဝင်လာတဲ့ ..မြစ်တွေ ဆီက.. ပါလာသမျှ အမှိုက်သရိုက် အညစ်အကြေးတွေကိုလည်း..
ပင်လယ်နဲ့တူတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ ကွယ်…။
ပိုစ့်လေးကို လာအားပေးလို့ကျေးဇူးပါနော် ။
ဘာများဖွင့်ဟ၀န်ခံမလို့လဲလို့အားရပါးရဖတ်လိုက်တာ။ အခုတလောရွာထဲမယ်ခေတ်စားနေတာနဲ့ပြောင်းပြန် ဘာလားဟ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖြစ်က လိင်ပြောင်းတဲ့အထိမဟုတ်ပေမဲ့ ယောင်္ကျားနဲ့ကလေးကိုစွန့်ခွာပြီး မိန်းမယူသွားတဲ့ မိန်းမတယောက်တော့ကြုံဖူးတယ်အေ။